नांगै मैदानमा उतारे पनि सत्य छेकिँदैन – Sourya Online
नांगै मैदानमा उतारे पनि सत्य छेकिँदैन
विष्णु रिजाल २०७५ असोज १७ गते १०:२८ मा प्रकाशित
बानेश्वर चोकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई सोध्दा हुन्छ, ‘सरकारका बारेमा आममानिसहरूको के धारणा छ ?’ पक्कै पनि सरकारका पदमा बस्नेहरूलाई जताततै राम्रो लाग्छ । तर, वास्तविकता यति मात्र होइन नै भन्दा यत्रो हमला ?
माधव नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति एकदम राम्रो छ भनेर नारा लगाउनुपथ्र्यो ? के पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली अनि वायुसेवा निगममा झापाका मदन खरेल, भारतका लागि राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीहरूको नियुक्तिका पक्षमा आरती उतार्नुपथ्र्यो ? जनताको अपेक्षा र पार्टीको घोषणापत्र लत्याउँदै ल्याइएको बजेटका पक्षमा नाराबाजी गर्नुपथ्र्यो ?
दसैँ र तिहारका वेला बम्पर उपहारका अनेक कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् । अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तै बम्पर खुलेको छ । माधवकुमार नेपालको सकेजति विरोध गर्नुहोस्, नम्बर बढाउनुहोस् ।
त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर, सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर, बुस्ट गर्नेगरी लेख लेखेर, जुन हिसाबले सकिन्छ, त्यही हिसाबले सत्तोसराप गर्दा हुन्छ ।
यसो गर्दा पार्टीमा पद प्राप्त व्यक्ति छन् भने त्यस पदका लागि उसको खास योग्यता झल्किन्छ । पार्टी एकता भइरहेको यस चरणमा कुनै पार्टी वा जनवर्गीय संगठनमा इच्छा लागेको पद पाउन सकिन्छ ।
सरकारी नियुक्तिका लागि व्याकुल छ भने उसको उचित मूल्यांकन हुन्छ । जागिर धरापमा पर्छ कि भनेर चिन्ता गर्दै अरूको पतनको दिउँसै सपना देख्ने साथीहरूलाई चेतना भए हुन्छ ।
तिनको व्यक्तित्व बन्नमा पनि कुनै न कुनै रूपमा माधव नेपालकै योगदान छ होला । हिजो केपी ओली कमजोर हुँदा ती कहाँ थिए ? तिनले बोल्ने भाषा कस्तो थियो ? जनकपुर महाधिवेशन ताका, बुटवल महाधिवेशन ताका र त्यसपछि माधव नेपाल सत्तामा हुँदा तिनको के हालत थियो ?
ती माधव नेपालका वरिपरि कसरी परिक्रमा गर्दथे ? हिसाबकिताब अरूले पनि राखेका होलान् । जहाँसम्म माधव नेपालले सरकारको विरोध गरे भन्ने चर्चा छ, त्यसमा दम छैन । सरकारले अझै राम्रो काम गरोस, हामीले नसके कसैले सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन भनेर संसद्मा बोलेको कुरालाई विषयान्तर गर्दै जीविका चलाउनेहरूलाई धेरै भन्नु केही छैन ।
तर, बानेश्वर चोकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई सोध्दा हुन्छ, ‘सरकारका बारेमा आममानिसहरूको के धारणा छ ?’ पक्कै पनि सरकारका पदमा बस्नेहरूलाई जताततै राम्रो लाग्छ । तर, वास्तविकता यति मात्र होइन नै भन्दा यत्रो हमला ?
के त्यसो भए माधव नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति एकदम राम्रो छ भनेर नारा लगाउनुपथ्र्यो ? के पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली अनि वायुसेवा निगममा झापाका मदन खरेल, भारतका लागि राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीहरूको नियुक्तिका पक्षमा आरती उतार्नुपथ्र्यो ?
जनताको अपेक्षा र पार्टीको घोषणापत्र लत्याउँदै ल्याइएको बजेटका पक्षमा नाराबाजी गर्नुपथ्र्यो ? कुरा सरकारको होइन, यतिवेला पार्टीको हो । पार्टीमा निर्वाचित भएर आएका जिल्ला कमिटीका नेताहरूलाई उपेक्षा गरेर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा माधव नेपालले स्वीकार गरेका छैनन् ।
उहाँ अध्यक्षसँग सल्लाह गरेरै विदेश गएको वेला त्यही भएर आगलागी भएजस्तो, तत्कालै दमकल चाहिहाल्ने गरी सचिवालयको बैठक बोलाएर माधव नेपाल पक्षलाई पूरै उपेक्षा गरेर प्रदेश कमिटीहरू बनाइएको छ । यसमा उहाँको विरोध छ । अहिले कसैले सरकारको विकल्प खोजेको छैन ।
चार बुँदे सहमतिअनुसार केपी ओलीलाई अझै दुई वर्ष सरकार चलाउने सुविधा छ भन्ने कुरा माधव नेपाललाई पनि थाहा छ । आक्रमणलाई तेज पार्न, पार्टीमा एकलौटी गर्न र आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न अरूलाई हेपेर जति नै अन्तर्वार्ता दिए पनि, नांगै मैदानमा उतारे पनि सत्य छोपिँदैन । हामी पार्टी एकताको चरणमा छौँ । यतिवेला विवाद बढाएर कसैलाई फाइदा छैन ।
तर, पार्टीका जिम्मेवार तहमा बसेका नेताहरूले मर्यादा नाघेर मैदानमा उत्रिएपछि प्रस्ट भए हुन्छ, प्रतिवाद पनि त्यही तहकै हुन्छ । किनभने, हाम्रो पार्टीको विधानमै लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै सदस्य समान छन् ।’ फेरि पनि नेताहरूबीच यतिवेला अझ बढी सुझबुझ र सहमति आवश्यक छ ।
विधि बन्नै बाँकी छ, नेतृत्वका बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । हिजो बिहान मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सिंगापुरबाट फोन गरेर माधव कमरेडसँग ठीकै कुरा गर्नुभएको छ ।
हुन त यसरी पार्टीभित्रकै नेताहरूबीच कुरा हुँदा पनि सत्ताका धृतराष्ट्रहरूले ‘आफ्ना’ का विरुद्ध ‘पराइसँग सल्लाह गरेकाले’ उनीहरूको ‘पतन हुने’ आरोप लगाउन बाँकी राख्दैनन् ।तर, पनि परिस्थिति सम्हालेर एकतालाई जोगाउनै पर्छ, कार्यकर्ताको स्वाभिमानलाई उँचो पार्नैपर्छ । (सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रिजालले गत सोमबार आफ्नो फेसबुकमा राखेको विश्लेषण)